AMISOM oo beenisay Iney kasoo Baxeen Magaalooyin ay Ka Talinayeen | SAHAN ONLINE
AMISOM oo beenisay Iney kasoo Baxeen Magaalooyin ay Ka Talinayeen
Wakiilka Gaarga ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ahna Madaxa Ciidanka Nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM Maman Sidikou ayaa beeniyey warar sheegaya in Ciidankoodu kasoo baxeen deegaano horay uga qabsadeen Al-Shabaab.
Warsaxaafadeed kasoo baxay Xafiiskiisa ayaa lagu sheegay in Maman Sidikou u cadeynayo in Ciidamada AMISOM aaney ka baxayn magaalo ama goob kale oo ay ka qabsadeen al-Shabaab.
….””mbassador Sidikou wuxuu jecelyahay inuu idiin caddeeyo in Ciidamada AMISOM aanay ka baxayn magaalo ama goob kale oo ay ka qabsadeen Alshabaab taas oo u saamaxaysa Alshabaab inay markale dib ugu soo noqdaan, si ay waxyeello u gaadhsiiyaan shacabka Soomaaliyeed ee nabadda jecel, sidii ay ku samayn jireen ka hor intii aan ciidamada AMISOM iyo kuwa Somalia hawlgallada bilaabin”ayaa lagu yiri.
Sidoo kale waxaa lagu sheegay Warsaxaafadeedka in AMISOM Iyo Ciidanka Soomaaliya ay xiligan ku hawlan yihiin dib u qaabeyn iyo si abaabul iyo sidii ciidamo loo geyn lahaa si dib loogu nooleeyo qorshe marra hore dejisnaa.
Wakiilka Gaarga ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ahna Madaxa Ciidanka Nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM ayaa dhammaan dhinacyada Soomaalida iney iska ilaaliyaan wararka been abuurka ah.
Ciidamada Nabad ilaalinta ee AMISOM ayaa Todobaadkan isaga baxay magaalooyin kala duwan oo kuyaala gobolka Shabeelada Hoose oo ay ugu danbeysay degmada Qoryoolay oo shalay ka baxeen.